Oxfam rescues Mphoengs villagers – NewsDay Zimbabwe
Previous article Easter death toll rises to 32
Next article Woodend clinches Novice title
Comment…Zvinonzi vashandi veOxfam vanofaira pfambi kwese kwanenge vachibatsira, maybe engaging the ladies of the is part of helping the community, kkk
Comment…Yaaaaaaa! Vayaaaaa, vaida kudira mai Mnangagwa mapopoma nemafashamu ezvipo pabhavhudhe ravo
hero basa. Kweke kungoda kudira gumi pazviwuru chete, nekuda kutsvaka kuonekwa. Vanazvo, havo vanoda rubatsiro. Uye kana munhu achibatsira nerudo murudo ahatsvake kuda kuonekwa nenyika kana pasi rose kuti azobatsira ngana nezvakati. Ndo RUDO, NTANDO, LOVE.